After-Sales Service ကို Pre-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု,| Fuzhou FMW Power Co.,Ltd.
တစ်နှစ်သို့မဟုတ် 1200 နာရီ 1.Guarantee ဒီဇယ်မီးစက်၏ထွ-စက်ရုံနေ့မှ (ပထမရောက်ရှိကိုမဆိုအညီ) ။
အာမခံကာလ, FMW Power 2.During စေသောမည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုလည်းမရှိအမှု၌အခမဲ့-of-တာဝန်ခံမီးစက်အားလပ်ချိန်မှာပူဇော်ပါလိမ့်မယ် ၏ချွတ်ယွင်းသဖြင့် မီးစက်တစ်စုံ သို့မဟုတ် မီးစက် Alternator သည် ။ FMW Powerကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှ ကြွယ်ဝသောမီးစက်မှအတွေ့အကြုံကို debugging နှင့်အတူကျွမ်းကျင်နည်းပညာရှင်ခန့်အပ် ဖောက်သည်များ '' အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာရှင်နှင့်အတူ bug ကိုရိုက်ကူးဖို့မြင်ကွင်းတစ်ခု။
3.FMW Powerထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအတွက်အဘို့အအားလပ်ချိန်မှာကောက်ခံ အဆုံးဖောက်သည်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏အာမခံချက်ကာလသို့မဟုတ်တာဝန်ခံအားလပ်ချိန်မှာပြီးနောက်မီးစက် အာမခံချက်ကာလအတွင်း။
ဒီဇယ်အင်ဂျင် 'မီးစက်အပါအဝင် 4.For အားလပ်ချိန်မှာ Alternative 'နှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏, FMW အာဏာအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအဘို့ပူဇော်နိုင်ပါတယ် အဆိုပါမီးစက်၏ဘဝ။
5. သင်ဟာပိုပြီးရဖို့ကို click နိုင်ပါတယ် မီးစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုနှမြောရ ။
ပြည့်ပြည့်စုံစုံအဆိုပါမီးစက်ဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးနောက်က ဖောက်သည် '' တောင်းဆိုချက်တွေအသီးအသီးအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်, FMW Powerရဆုံးအဖွဲ့သည်စဉ်းစား မီးစက်တစ်စုံနှင့်မီးစက် Alternative ၏ရောင်းအားမှကျူးလွန်သောသူကို Power, ပါလိမ့်မယ်ပညာရှင်ပီသစွာ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအသင်း၏အထောက်အပံ့များနှင့်အတူစီးပွားရေးနှင့်ဖြစ်နိုင်မီးစက်ပါဝါဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအစုသည်။ ၏အန္တိမရည်မှန်းချက် Pre-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူဖောက်သည် '' အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
FMW Powerထုတ်လုပ်မှုခြေရာခံခြင်းအဖွဲ့အားလုံးမီးစက်များ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုခြေရာခံပါလိမ့်မယ် ထိုကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်မှုအားလပ်ချိန်မှာအသေးစိတ်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား, ခန့်မှန်းခြေအဖြစ်အမိန့်, ထို့နောက်ပေးပို့အချိန်, တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်မှအချိန်မီတုံ့ပြန်ချက်များနှင့် အထူးသဖြင့်။ ၏အခြေခံပေါ်တွင်မီးစက်များ၏တိကျမှန်ကန်ပေးပို့အချိန်အာမခံ ဖောက်သည်များ '' ဝယ်လိုအား။
ဤအတောအတွင်းထုတ်လုပ်မှုခြေရာခံခြင်းအဖွဲ့လည်းနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တင်ပြပါလိမ့်မယ် ၏အစီရင်ခံစာ ဒီဇယ်မီးစက် ကဖန်ဆင်းသောသို့မဟုတ်မီးစက် Alternative, မီးစက်တစ်ဦးစံနှင့်စနစ်တကျစမ်းသပ်မှတဆင့်စမ်းသပ်ခြင်းစင်တာမှ အရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးရန်ပို့ဆောင်မှုမပြုမီအသီးအသီးဖောက်သည်။
ဖောက်သည်မီးစက်အစုံသို့မဟုတ်မီးစက် Alternative, FMW Powerကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် , အွန်လိုင်းကို real-time installation နဲ့ကြိုတင်စတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလမ်းညွှန်မှုပူဇော်ပါလိမ့်မယ် နှင့် FMW Powerကိုလည်း၏အမှု၌အညီအထူးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ပါသည် ငွေရတတ်သောသူတပ်ဆင်ခနှင့်အတူမီးစက်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာရှင် assign ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့လိုအပ်ချက်, အခင်းဖြစ်ပွားရာမှအတွေ့အကြုံနှင့် on-site ကို installation ကိုညွှန်ကြားချက်။
သာလျှင်ဖောက်သည်မီးစက်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်တယ်, ငါတို့ နည်းပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသင်တန်း, အမည်ရအော်ပရေတာသင်တန်းပေးခြင်းစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ ဖောက်သည် FMW Powerလေ့ကျင့်သင်ကြားခံရဖို့စက်ရုံသို့မဟုတ် FMW Powerပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များပေးပို့နိုင်ပါတယ် အာဏာဖောက်သည် '' တည်နေရာတဲ့ professional နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ assign နိုင်ပါတယ် နည်းပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များလေ့ကျင့်။
သင့်လျော်သောနှင့်သဟဇာတလောင်စာဆီ, ရေနံနှင့် အအေး forgenset ။
Prestart အဆိုပါ gensets များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ။
၏ Start ကို / Stop gensets ။
၏ခြယ်လှယ် အဆိုပါ gensets ။
၏ကို Maintenance gensets ။
ဘုံ၏ပစ်ခတ်မှု မီးစက် bug တွေ။
3, ကို Maintenance Service ကို
အခါတိုင်းနှင့်နေရာတိုင်းမှာမီးစက်၏ပျက်ပြားခြင်းနှင့်ချွတ်ယွင်းသတ်မှတ်သို့မဟုတ် မီးစက် Alternative ဖြစ်ပေါ်, FMW Powerပရော်ဖက်ရှင်နယ်မျိုးပေးသွားမှာပါ မည်သည့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲနည်းပညာပိုင်း-တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်နည်းပညာ-service ကို။ အဆိုပါပြီးနောက် FMW Power၏ဝန်ဆောင်မှုအသင်းကိုလည်းများအတွက်တစ်ဦးချင်း archive ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ် တစ်ဦးချင်းစီနှင့်မဆို၏အမှု၌အမီးစက်နှင့် ပတ်သက်. တိုင်းအသေးစိတ်ကိုအပါအဝင်ဖောက်သည် အရေးပေါ်အသုံးပြုမှုနှင့်လည်းပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းစာရင်း၏အသိပေးစာပေးပို့ပါလိမ့်မယ် ရုံဖောက်သည်အချိန်အတွက်မီးစက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်၏အသိပေးစာ။